भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती र उनका भाई विरुद्ध मुद्दा दर्ता « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती र उनका भाई विरुद्ध मुद्दा दर्ता
९ असार २०७९, बिहीबार १७:३१
एजेन्सी । भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती र उनको भाई शौविक चक्रवर्ती विरुद्ध लागूऔषध प्रकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
भारतीय नार्काेटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबि) ले भारतीय अभिनेता स्व. सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या प्रकरणमा लागूऔषधको कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस मामिलामा अहिले एनसीबीले रिया चक्रवर्ती, उनको भाई शौविक चक्रवर्ती र अन्य व्यक्तिलाई आरोपी बनाएको छ । एनसीबीले अभियुक्तहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । उनीहरुलाई स्व. सुशान्त सिंह राजपुतका लागि लागूऔषध खरीद गरेर दिएको आरोप लागेको छ ।
सरकारी वकिल अतुल पाण्डेले सबै आरोपीहरूको चार्जसिटमा आरोप तय गरेका छन् । उनले ड्राफट चार्जसिट दर्ता गर्दै रिया र उनको भाइले लागूऔषध प्रयोग गरेको र सुशान्तका लागि पनि खरीद बिक्री गरेको दाबी गरेका छन् । अदालतले सबै आरोपीहरूमाथि आरोप तय गर्ने तयारीमा रहेपनि केही आरोपीहरूले डिस्चार्ज निवेदन दिएकाले अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन । अदालतले डिस्चार्ज निवेदन माथि सुनुवाई गरेपछिमात्रै आरोपीहरू माथि अदालतले मुद्दा चलाउने छ ।गत बुधबार भएको कानूनी कारवाही प्रक्रियामा रिया र उनका भाई उपस्थित थिए । न्यायाधीश वीजी रघुवंशीले यो मामलाको सुनुवाई १२ जुलाईमा गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
सुशान्त सिंह राजपुत १४ जुन २०२० मा मुम्बईको आफ्नो भाडाको घरमा मृत फेला परेका थिए । तयस बेलादेखि एनसीबीले लागूऔषध मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा रिया चक्रवर्तीलाई २०२० सेप्टेम्बरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । करिब १ महिना जेल बसेपछि रियाले मुम्बई उच्च अदालतबाट जमानत पाएकी थिइन् । भारतको सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा फेरी यस मामिलामा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।